Nouvel an Chorale | FKMP
Nouvel an Chorale
Teraka mba hanompo fa tsy ho tompoina
Asabotsy 22 Desambra, fety fanokafana ny vanim-potoan'ny Noely
Nandritra ny herinandro maromaro dia niaina tao anatin’ny hafalian’ny fotoana fankalazana ny Noely isika mianakavy, ary dia tsy diso anjara tamin’izany ny teto amin’ny FKMP nanome lanja ity fety lehibe hoan’ny Fiangonana ity.
Tamin’iny Noely 2018 iny dia ny loha-hevitra hoe « Teraka mba hanompo fa tsy ho tompoina » no nanentana ny kristianina manontolo teto amin’ny Fiangonana Katolika Malagasy eto Paris sy ny manodidina. Vokatr’izany dia an-kafaliana hatrany no niarahan’ny mpianakavy nifaly tamin’ireo hetsika maro sy Sorona Masina niaraha natao
Tamin-kafaliana no nanokafan’ireo ankizin’ny FKMP ny fankalazana ny vanim-potoanan’ny Noely ny sabotsy 22 desambra 2018 lasa teo. Fampisehoana an-tsehatra no nanehoan’izy ireo izany hafaliana izany. Maro dia maro ny ankizy sy tanora nandray anjara, mampiseho izany habetsahan’ny mpandray anjara izany ny sary sy ny horonan-tsary hitantsika. Nampiseho ny talentany tamin’ny hira, tsianjery, dihy ary koa tantara an-tsehatra izy ireo ary dia mifandray hatrany amin’ilay loha-hevitra hoe « teraka mba hanompo fa tsy ho tompoina » izay rehetra niseho. Nandray anjara mavitrika toy ny mahazatra ihany koa ny antoko mpihira Feon’Anjomara. Fotoana fanaovan’izy ireo ny « mini-concert » moa ny fotoanan’ny Noely ka dia fiderana an’Andriamanitra an-kira no nanakoako tamin’io alin’ny asbotsy io nidera sy nankalaza ny fahaterahan’i Jesoa Kristy Mpamonjy. Koa satria moa fetin’ny mpianakavy ny Noely dia mba nandray anjara tamin’ny fampisehoana ihany koa ireo Ray amn-dreny ary an-kafaliana hatrany no nanatanterahana izany. Taorian’ny fampisehoana an-tsehatra dia nitohy ny lanonan’ny mpianakavy tamin’ny fifampizarana sy ny fiaraha-misakafo narahina koranam-pianakaviana.
Fa nitohy ny sasak’alin’ny 24 desambra 2018 ny fankalazana ny vanim-potoanan’ny Noely teto amin’ny FKMP. Nanetriketrika ny Sorona Masina tamin’ny sasak’alina ary nientan-kafaliana sy niray fo ny Kristianina maro dia maro namonjy izany. Toy ny isan-taona dia fifampizarana mofo mamy « buche de noël » no nifampisarahan’ny mpianakavy iny alina iny.
Lamesa Noely 25 desambra 2018
Ny ampitso andro Noely 25 desambra 2018, dia maro ireo Kristianina namonjy ny Sorona Masina ary nanana anjara manoka ny FKMP satria ny Kardinalin’i Madagasikara, dia i Kardinaly Désiré Tsarahazana no nitarika ny Sorona Masina. Noely voalohany ihany koa niarahana amin’ny Aomonie Mopera Edmond Randriambololona ka dia an-kafaliana tanteraka no niainan’ny Kristianina rehetra ity fotoana ity.
Nouvel an Chorale 2019
Previous Post: Fankalazana ny fetin’ny Noely 2018 teto amin’ny FKMP
Next Post: Edito 14 avril 2019